प्रेमिकालाई एक चिठी - Laltin.com
प्रेमिकालाई एक चिठी
Prem Patra (Voice :- Sandesh Basyal)
कुनै समय तिमीले सोधेकी थियौँ ” मैले छाडेर गए भने के गर्नुहुन्छ ?” नभन्दै गयौं पनि त्यहीँ वियोगमा लेख्न मन लाग्यो एक पत्र; तिमीलाई, मलाई, समयलाई अनि मायालाई समेटेर । घण्टौ देखि टोलाएर, लोलाएर बसे-सोचे भूल र फूलको कथा तर अहँ पहिल्याउनै सकिन मैले हाम्रा मायाका आधारहरू र उत्गम विन्दुहरू जसलाई अन्त्य हुन समय लागेन ।
आजकाल प्रेमिल पुस्तकहरू पढ्न थालेको छु । लक्ष्मीप्रसादको मुना मदन, निकोलस स्पार्कस् को अ वल्क टु रिमेम्बर, विलियम शेक्सपीयरको रोमियो एन्ड जुलियट, सुबिन भट्टराईको समर लभ । अध्ययन सँगै प्रेमलाई गहिराईबाट नियाल्न खोजिरहेछु तर कथाको वियोगमा रून आएन मलाई किनकि हरेक प्रेममा वियोग भेटे मैले । प्रेममा वियोग भएन भने त्यो प्रेम नभएर सम्झौता हुन आउँछ . अलिकति मनको अलिकति तनको ।
तिमीले सोच्यौ म बदलिए भनेर तर म त्यहीँ भीडमा गुमनाम भएको छु जसरी मुना मदनमा पवनको प्रेम कथा गुमनाम भएको छ । त्यसैगरी मेरा कथाहरू नि कतै गुमनाम भए । पात्र विहीन, अलपत्र ।
सानो पसलमा बसेर चिया पिई रहदा आकाश गड्गडिई रहेछ तिम्रो मनले झै चट्याङ हान्न खोज्छ अत्तालिएको मनलाई । चुरोटको सर्को सँगै स्वट्ट ताने तिम्रा यादहरू जलाई दिए एकसरो मुटु अनि उडाई दिए तिम्रा यादहरू यदाकदा हावामा बादलमा ।
म सडकको दायाँ बायाँका प्रेमिल जोडिहरूलाई नियालि रहेछु ।आजकाल कुनै ईर्ष्या जाग्दैनन् मनमा उनीहरूको प्रेम देखेर । म उनीहरूको प्रेममा मात्र पिडा देख्छु । जो भोलि छुट्टिदै छन् । म उनीहरूको प्रेममा बाचा देख्छु जो भोलि तोडिदै छन् । आखिर किन गरिरहेछन् बाचाहरू ? किन देखिरहेछन् स्वप्नील संसारहरू ? जब भोलि गएर तोडिनु नै छ ।
थाहा छैन तिमीले यो पत्र पढ्छेउ या पढ्दिनौ तर म लेखीरहेछु शब्दहरू समयका लागि, इतिहासका लागि अनि प्रेमका लागि । तिमीलाई के लाग्छ ? प्रेम पिडा नहुदो हो त मुना मदन यतै कतै समय सँगै बिलाएका हुने थिए । ‘समर लभ’, समर लभ नबनेर मात्र एउटा कहालिलाग्दो समर अर्थात गर्मी हुने थियो । प्रेममा वियोग छ त्यसैमा त मजा छ प्रिय ।
भौतिक दूरी भए जोडिदिन्थे तर यहाँ कुरा मनको आयो त्यसैले जोड्दैछु शब्द सँगै मन र प्रेमलाई एकसात । भविष्यमा कतै जून बनेर उदायौ भने पूर्णिमामा आएर नखोज्नु मलाई । म औशीँमा रमाउने मान्छे मलाई मेरो औशीँको अन्धकारमा छाडिदिनु तिमी । म मौनतामा रमाउने मान्छे मलाई आएर नबोलाउनु तिमी । म शब्द सँगै हराउने मान्छे मलाई आएर नखेलाउनु तिमी ।
त्यसैले यो पत्र लेख्दैछु प्रेमीका तिमीलाई ताकि मेरा प्रेममा उठेका प्रश्नहरूलाई यी शब्दहरूले समेट्न सकून । सारा प्रेमलाई नसके पनि मेरो अमर प्रेमलाई यी शब्दहरूले कहिल्यै नबिर्सुन ।
अब पुग्यो प्रिय, प्रेमको अर्थ नै के छ र ? यदि एकदिन बिछोड हुनु नै छ भने सपनाका अर्थ नै के छन् र यदि सपनालाई उज्यालोमा बिर्सनु नै छ भने । त्यसैले मेरी प्रेमीका यतै कतै बिसाउदै छु यो वियोगलाई जहाबाट नयाँ सुरूवात गर्नुपर्ने छ, मेरा लागि, तिम्रा लागि, समयका लागि । त्यसैले यसपटक मेरो प्रेम तिमीलाई दिन असमर्थ छु । सायद तिम्रो मन त्यही रहे अर्को पटक अवश्य आउने छु तिम्रो प्रेम बनेर तब सम्मका लागि यी शब्दहरू तिमीलाई ।
पढेर पत्र च्यात्छेउ या संहालेर राख्छेउ तिमीमा निहित कुरा ।
उहीँ तिम्रो समयको प्रेमी
Previous: अमेजनले एस्ट्रो नामक होम रोबोट लन्च गर्ने घोषणा गरेको छ।
Next: अब आर्टिफिसिएल इन्टिलिजेन्सले दुइ घन्टामा पानि पर्छ कि पर्दैन भनेर अनुमान गर्न सक्ने